Umzi mveliso weNtengiso yezeNtlalontle ka-2012
Icandelo lezentengiso lezeNtlalo
NgeCawa, Oktobha 14, 2012 NgoMgqibelo, Oktobha 13, 2012 Douglas Karr
IGO-Globe.com iphuhlise i-infographic, Icandelo lezentengiso lezeNtlalo, ekhetha idatha ephambili kuMvavanyi weendaba zeNtlalo Ingxelo ye-2012 yeNtengiso yezeNtlalontle. I-infographic igubungela iiNdaba zeMidiya yezeNtlalontle, uMceli mngeni kwiMidiya yezeNtlalontle, iqhinga labathengisi beendaba zosasazo kunye nokunye okuninzi.
Ngokoluvo lwam, eyona mingeni iphambili iyabonakala. Ngelixa iitekhnoloji zethu ziqhubeka nokuphucuka, iinkampani zisasokola ukusebenzisa ngokupheleleyo imithombo yeendaba zentlalo, ukufumana iimpembelelo, ukulinganisa imbuyekezo kutyalomali, ukwakha abaphulaphuli, kunye nokuphuhlisa iindlela ezingadingi zixhobo zininzi. Inyani yile yokuba izibonelelo zosasazo lwentlalo ziyamangalisa, kodwa umgudu ofunekayo wokufumana ezo ziphumo uyaqhubeka nokujongwa lushishino oluqhubeka nokuzithengisa kwaye lubeke ulindelo phezulu kakhulu.
tags: kwi-infographicimingeni yemidiya yoluntuUmxhasi woLuntu weMidiyaimboni yemidiya yoluntuishishini lokuthengisa ngemidiya yoluntuingxelo yentengiso yemidiya yoluntu
Intengiso yeNtlalontle yoKhenketho neNdwendwe
Kutheni uneeFomu ezingaphantsi kweeFildi ziqhuba ukuGuqulwa
Oktobha 15, 2012 ngo-2: 56 PM
I-infographic elungileyo. Ukufumana abaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo kubaluleke kakhulu, imidiya yoluntu ayisiwo umbuzo wamanani ekrwada. Okubaluleke ngakumbi kukufumana unxibelelwano lokwenyani nabaphulaphuli bakho ojolise kubo.
Nov 30, 2012 kwi-5: 48 AM
Soloko ujonge umyalezo wakho kwiimfuno zeprofayile yakho efanelekileyo yomthengi
okanye umthengi kwaye ungaze woyike ukwahlukanisa abo bangenanjongo
usebenzisa iinkonzo zakho. Banokwenza amanani akhangeleke elungile, kodwa ngo
Akukho xabiso kwishishini lakho. Ngapha koko, ukuba uhlawula ibhlogwidth yebhlog yakho
ngegigabyte okanye uhlawula umrhumo womfundi ngamnye ngencwadi yakho ye-imeyile
inkonzo, abazingeli abakhululekileyo bachitha imali kunye nexesha lakho.
Uyilo lwewebhusayithi eSingapore
Agasti 21, 2013 kwi-6: 05 AM
Enkosi ngolwazi lwakho oluxabisekileyo oluchazwe ngokucacileyo.